Imbiki Herilaza: “Voafetra ny azon’ny filoha mpisolo toerana atao” | NewsMada
Imbiki Herilaza: “Voafetra ny azon’ny filoha mpisolo toerana atao”
“Inona ny tokony hataon’ny mpisolo toerana ny filohan’ny Repoblika? Voalohany ny fampandehanan-draharaha andavanandro amin’ny maha filoha mpisolo toerana. Izany hoe: fanaovan-tsonia ireny antontan-taratasy ataon’ny filoham-pirenena sonia ireny.”
Izay ny fanazavan’ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza, ny amin’izay azon’ny filoha mpisolo toerana noho ny fahabangan-toeran’ny filohan’ny Repoblika amin’izao maha kandidà azy izao. Araka ny lalàmpanorenana, ny filohan’ny Antenimierandoholona izay mpisolo toerana izay. Afa-mampivory hatrany ny filankevitry ny minisitra koa izy, miaraka amin’ny praiminisitra sy ireo minisitra rehetra ao anatin’ny governemanta.
Misy ny tsy azo atao
Anisan’ny tsy azony atao kosa ny fanalana sy fanendrena mpiasam-panjakana ambony ka atao ao anatin’ny filankevitry ny minisitra amin’ny famoahana didim-panjakana izany. Eo koa ny fampidirana ny firenena malagasy ao anatin’ny fifampiraharahana iraisam-pirenena, na fifampiraharahana goavana. Izany hoe, tsy afa-manao sonia fifanarahana iraisam-pirenena izy, tsy afaka mamatotra an’i Madagasikara amina zavatra ho avy.
Ny amin’izay fisoloan-toeran’ny filohan’ny Antenimierampirenena amin’ny fahabangan-toeran’ny filohan’ny Repoblika izay: tsy tokony hiandry ny fe-potoana farany ny filohan’ny Repoblika vao mametra-pialana noho izy kandidà amin’ny fifidianana. Efa tokony ho nametra-pialana izy, raha vao nivoaka ny lalàna amin’ireo kandidà ofisialy amin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Lasa mifangaro amin’izao fotoana izao ny asa maha filoha sy ny maha kandidà azy.